Ifenisha Decor kubhekwe lokusungula, okumele kancane umshado. Imikhiqizo eminingi yasendlini bheka alithandeki emva ukuphila isikhathi eside. Abaningi bangase kungalimala. Indlela ubuyekeze i ikhabethe ubudala? Ukuze wenze lokhu, ungasebenzisa omunye imibono efakazelwe, lapho zisetshenziselwa izindlela ezitholakalayo.
Ingabe zonke closet izibuyekezo?
Emikhayeni eminingi kukhona ikhabethe ezahlukene. Ngokuhamba kwesikhathi, balahlekelwa ukuhlobana futhi ukubukeka yobuhle. Qaphela ukuthi isibuyekezo kungahlali ngomkhiqizo ngamunye. Ngokwesibonelo, lapho esebenza MDF futhi particleboard imiphumela emihle izuzwe ngeke isebenze, futhi kubuyekezwa kuzothatha imali eningi.
Uma okunomsoco ifenisha, isibonelo, ezenziwe ngokjuni, ngcono ukubukeka kwayo kuyoba ezishibhile ukuthenga esisha. iKhabhinethi Decor ubudala kungenziwa ngokuzimela, ngaphandle kokusebenzisa amasevisi ongoti. Kuyinto kudingekile kuphela ukuze ukhethe indlela okufaneleka kakhulu kunokunye.
Indlela ubuyekeze i ikhabethe ubudala? Ukuze wenze lokhu, isicelo ezihlukahlukene imibono original nobuchwepheshe. Ezinye izinhlobo umsebenzi kungenziwa ngaphandle amakhono akhethekile. Kodwa kukhona ongakhetha sokubuyisela ukubukeka ifenisha, ngokuba ukusebenza zazo kuye kudingeke sifunde kancane.
Ikhabethe noma izinto kungenziwa olusha ngokusebenzisa izindlela ezilandelayo:
Phrinta noma odonga.
Ezinemibala ingilazi ibala ifilimu futhi vinyl amalebula.
Frosted ingilazi noma izibuko.
Vinyl noma ezivamile lodonga.
Ngayinye yalezi zindlela kunezinzuzo zako kanye nebubi. Kodwa uma wenza ilungelo umsebenzi, uzothola look wokuqala iKhabhinethi, bese ngeke kudingeke ukuthenga esisha.
Phrinta noma yamaphephadonga?
Le ndlela isetshenziswa ukuhlobisa izingubo zokugqoka. Esikhathini ingaphakathi eside esetshenziswa yokwehlela enkulu zokunyathelisa. Ongoti iphepha iphrinta noma ezinye iphethini ebusweni sisetshenziswa. Ububi ukuthi kuyabiza. panel okuhlobisa nesithombe ukuphrinta ku ingilazi banegama "skinali".
Indlela ubuyekeze i ikhabethe ubudala indlela kutholakale kalula? Ukuze wenze lokhu, ungakhetha odonga. Kufanele ithengwe ezitolo DIY. Intengo ruble mayelana 300. Photowall Isihloko ihlukile - namathafa, izimbali, izilwane. Ngoba unamathela kokokunamathisela lisetshenzisiwe isitashi, ngoba ngokusebenzisa ke, ungakwazi kamuva susa isithombe ubudala, esikhundleni salo kube nokuthile entsha.
Isicelo ibala vinyl ifilimu noma stickers
Indlela ubuyekeze i ikhabethe endala lezi zimali? Zimane nje ethe njo ebusweni ukwenza umkhiqizo lemukelekako. Angcolile ingilazi amafilimu kubhekwe nemfashini namuhla. Bona angathengwa in okukhethekile ezitolo.
Ngaphezu decor enhle, ifilimu livikela iKhabhinethi ekulimaleni. Ukuphungula sticker silula. Izindleko umhlobiso ezinjalo incane. isizinda Self-ingcina kungashintshwa njalo, ngoba kalula fixed noma zisuswe.
ingilazi frosted nezibuko
Old ikhabethe buyekeza izandla zakho kuzonisiza Matting. Indlela kufanelekile ingilazi kanye esibukweni imiklamo. Ngo Matting commercial iqedwe ungqimba phezulu esibukweni noma ingilazi. Kungaba uthole yomkhiqizo multi-level.
Ukuze wenze frosting yengilazi noma izibuko izovuleka nge udaka ekhethekile. Ukuze usebenze stencil ezidingekayo noma irabha spatula. I-stencil kufanele sibeke phezu, ukusebenzisa nokunamathisela ku spatula yakhe. Khona-ke konke kufanele kwesokunxele esikhathini, amalungiselelo e imiyalelo. Uma esetshenziswa nge unama olwalwenza, uzodinga ukuba uwuhlikihle kanye imizila ihora. amanzi pasta okusalile kuyaqedwa.
Ukusetshenziswa vinyl kanti ezivamile lodonga
Ishadi Lezingubo Engingazigqoka noma izitsha zingenziwa ukuba entsha uma okleit lodonga. Lokhu kukhetha efanelekayo ukuhlobisa noma ngokhuni ifenisha ubudala "namaSoviet". imikhiqizo enjalo oyohlala isikhathi eside. Perfect zakudala iphepha lodonga, njengoba bebizwa kalula camera nge glue ethe njo. Futhi zibiza vinyl kancane. Kodwa lodonga abavamile kufanele nemibi: bangabakaNkulunkulu izinga abampofu, uthathelwe nabo elula.
Vinyl lodonga kungaba iphepha noma Esekelwa okungezona nokwelukiweyo. Basuke kubhekwa nzima elula. Phela, induku vinyl iphepha-based kulula uma usebenzisa i-glue isitashi. Ngaphambi gluing wallpaper ngempela degreased ebusweni. Lokhu kwenziwa utshwala, benzene, acetone. Wallpaper kufanele ukusakaza ngendwangu, ukuze iphepha aningenanga amagagasi. Khona-ke ukuthola umsebenzi kucocekile.
Le nqubo ibizwa ngokuthi kwenkundla trafarirovaniem. Ukusebenzisa usimende stencil ingafinyelela ngobuningi izingxenye zokuqala. Bona repainted e yimuphi umbala, pozolachivayut.
Kuleli phephandaba yilezi:
Uma phezu kukhona upende omdala, khona-ke ziphathwe lokukhuhla ukuze baba base ebonakalayo lokhuni. Uma ifenisha akuyona ezinemibala, kubalulekile ukususa ungqimba engenhla, ukuwuhlanza kusuka ukungcola. Imifantu kufanele ukupenda phezu putty. It yakhelwe ukuba athathe amakhadibhodi stencil ukuthi unamathele emnyango isalothephu lenkhulu.
Khona-ke uthatha trowel flat, sisebenzise usimende isixazululo zokuhlobisa phezu stencil ngokugcwalisa ngalo ingaphakathi. Ngaphambi olukhonkiwe kuyadingeka ukususa stencil bese ummese ukuqeda zamehlo. Ngemva iphele iKhabhinethi iphathwa ngopende acrylic, okuyinto kunomphumela zokuzivikela. Khona-ke zidinga varnishing.
Kubukeka ukusetshenziswa enhle lendwangu ukubuyekeza ikhabethe. Indlela ukuguqula i-iKhabhinethi ubudala ngosizo yayo? izimfanelo Yesigcilikisha ifenisha impahla. Ngale ndlela kungenzeka ukuhlobisa iKhabhinethi iminyango, ebiyelwe ngaphansi Foam impahla noma ukupheda polyester. Indwangu ngemuva fixed ifenisha stapler noma izipikili ketshezi.
Material ngoba Upholstery efiselekayo ukukhetha umbala sangemuva noma ezinye izinto ingaphakathi. Kungcono ukuthola izicubu obukhulu ukuthi zinwetshwe kalula futhi zikhubazekile ngokuhamba kwesikhathi. umhlobiso okunjalo kungashintshwa nganoma yisiphi isikhathi ngokusebenzisa inketho ehlukile.
Ikakhulukazi ukubuyiselwa nokudweba
Ngokuvamile kudinga ukubuyiselwa iKhabhinethi ubudala, okuvumela ukuthuthukisa ukubukeka kwayo. Lokho ifenisha izothatha eziningi, kubalulekile ukuba usebenzise lezi amathiphu ngalesi umsebenzi:
Ngokwengxenye ukhuni sesibolile iphathwa nge ibhulashi metal. Ngakho ukususa u izicubu efile. Nothuli kufanele wageza off ngamanzi jet.
Ngaphambi yokudweba ekhabetheni womile, okuyinto ethatha izinsuku 1-2.
Uma kukhona izimbobo kusukela izinzipho, imihuzuko nezinye ukukhubazeka, ebusweni ziphathwe spatula. Zonke izingqimba kumele kube ezomile kahle.
Uma kukhona izingxenye ifenisha kusuka nokugqwala, liphathwa isixazululo ekhethekile.
Ukuze upende kungcono ukukhetha acrylic. Uma usebenzisa koqweqwe lwawo, kungcono ukuthenga i alkyd, ngoba izinga. Sebenza kulula ukwenza roller isipanji upende lingena ngokujulile ngakho.
Lacquer kuyinto matte, ecwebezelayo futhi silky. Kungcono isibambo spray ifenisha.
Lezi amathiphu kuzovumela ukwenza umsebenzi izinga. Ukubuyiselwa iKhabhinethi ubudala kusiza ukuvuselela ukubukeka kwayo. Kuyadingeka ukuba ukhethe umqondo kwesokudla, futhi ungakwazi uqhubekele ekwenzeni lokho okuhleliwe. Ngemva kwalokho, ifenisha ziyojabula umbono soqobo. Ngaphezu kwalokho, yimpumelelo self-update ifenisha ncamashi kuphakamisa wena kwemizwelo nje kuphela kodwa futhi ukuzethemba. Into eyinhloko ukuba siqonde ukuthi ezahlukeneyo ehlongozwayo ngenhla akunandaba!
"LEROM" - ifenisha: kubalulekile ukuba impendulo!
Yokwakha yaseGrisi - kuyinto esikhundleni ehlukile okhunini oluqinile. Interior iminyango yokwakha yaseGrisi: izici kanye nezinzuzo
Nightstand ngokuba lokulala kanjani ukukhetha?
Ama-Moccasins Tods. Umlando weBrith
Indlela kwandise ingcindezi yokufuna?
Armeria: zokutshala nokunakekela, ukutshalwa